I-Microstation INKQUBO YOKUQHUBANISA - Kuya kufuneka ivumelanise ne-interface entsha - ii-Geofumadas
NgoNovemba, 2016 Microstation-Bentley, Ukuprinta kokuqala
Xa uhlelo CONNECT of Microstation, yasungulwa 2015 kunye 2016 igqityiwe kulo nyaka, Microstation ujongano uguqula zemveli menu bar esecaleni kunye nohlobo ophezulu menu Microsoft Office. Siyazi ukuba olu tshintsho kuzisa nempembelelo yayo bomsebenzisi bendimazi apho akhoyo ukufumana amaqhosha, njengoko kwenzekayo kubasebenzisi AutoCAD e 2009, kodwa njengoko sele sibonile iziganeko ntetho, ukuba into sitshaye elungileyo Bentley Iinkqubo zicwangciso lakho lokudibanisa utshintsho ngokuthe ngcembe kwaye lugcinwe ixesha elide.
Hi nga tsundzuka ngemeko ifayile DGN ethe nje utshintsho emithathu kwiminyaka 36. IGDS amasuntswana kokuqala 16 ukususela 1980 Intergraph de DGN V7 of 1987 32 ivela iyasebenza ungazama ukunciphisa, i DGN V8 leyo yaphunyezwa 2001 64 utsotsi xa edlula, leyo sele iminyaka 15.
Kwinqanaba leenguqu eziphambili (ngaphandle kokuya kwiinkcukacha ze-35 iminyaka) Ukuziphatha Platform malunga kweminyaka esixhenxe, ukuze ukhumbule ukusuka Microstation 95, Microstation V8 e 2001, Microstation V8i e 2008 kwaye ngoku Microstation indibaniselwano kwisi iqaliswa ngo 2015 kwaye ihlanganiswe ngokupheleleyo kule 2016 ngokuvumelana ababonise kwiNgqungquthela yaseLondon.
Kuba ngoku ndifuna jonga kwi ujongano ukutshintsha, nto leyo eye wandishiya elifuna ungamangali emehlweni yokuqala; nangona utshintshwano V8i kwi- baninzi, ncamisa kwingcamango imigca ezahlukileyo Geo-Engineering kwimeko BIM Infrastructure, okwenza iimveliso zawo ezintathu eziphambili: Design (Microstation), Management (ProjectWise) kunye zoBomi (AssetWise) kwaye ngokugqithiseleyo kudlulisela imodeli yokulayisenisa phantsi komgaqo weSoftware njengeNkonzo.
Ukusondelana kweBentley kunye ne-Microsoft
U-Microsoft usenokungabi ngumqambi wendlela yokunxibelelana neRibbon, nangona abantu beyidibanisa ngokuthi "Microsoft Office 2010 style" kwaye ngenxa yoko yaziwa ngokubanzi ukuba izixhobo ezininzi namhlanje zinokusebenza kwazo ngendlela. Ke, ukuba kufutshane kweMicrosoft kunye nePorto kube nefuthe elithile. Kodwa inyani yokuba ndibone iMicrosoft inelifu layo elingasentla, i-HoloLens yayo, isikhuselo sayo somphezulu wegitante kunye neenkcazo zayo ezivakalayo kwiNkomfa yeziSeko ukusukela kulo nyaka uphelileyo, kwimbono yam ye-geofumada yokujonga, xa i-900 iye kuluntu lonke ngonyaka, IMicrosoft iya kufuna okungaphezulu kokuthengisa iilayisensi zeProjPise kwilifu laseAzure. Oku kuyasebenza, nangona nge-mystique ye-CEO eyicinge kakuhle kakhulu ukuze iphupha lobomi bakhe lingafi; kwaye oko kungqinwa kukubona iTrumple, iTopcon kunye neNokia ngamakhonkco adibeneyo aya ngaphaya kwendlela yemveli.
Yiyiphi inzuzo ye-Ribbon Microstation
Ozithobileyo, Bentley wayesoloko baqhanqalazela nokubane ujongano efana isimo kwabanye, ukuze menu ngaphambili nkqo V8 waba isizinzisi e V8i, ngaphezu izibonelelo ukufikelela izixhobo kwisithuba sokusebenza esekelwe. Kodwa kwakunjalo amaqhosha ntofontofo ukhangela newbies, ngoko ke umxholo top Ribon na utshintsho nenzuzo, ucinga ukuba ingqiqo iifestile evakalala kulandela flow akatshintshi imiyalelo. Ngezansi, olu hlobo menu sele idume kakhulu, ukuba ubuncinane akuyi kufuneka ukuba uqeqeshe abasebenzisi.
Kwakhona kubalulekile, ukuba izinto ezininzi zeendawo zokusebenzela zifihliwe apho ngoku zibonwa ngakumbi ngobungane kwimenyu yokuqala. Kwaye ekugqibeleni, kubalulekile ukuxabisa, ukuba imenyu ayiyi kuba yinto ecacileyo kwiplatifti leyo, ngenxa yenguqu kwisayizi yesikrini, babe yingxaki ixesha elide.
Ngoko, into esinayo ngasentla yi-dropdown workflow, ibha yamathuluzi okufikelela ngokukhawuleza, iithebhu zeRibon, kunye nebhokisi lokukhangela elisebenzayo kunye ne-F4, elona lihle ukulibala inqaku.
Mhlawumbi oku kuvumela abasebenzisi ukuba basebenzise ngokwenyani izixhobo ezazilapho. Ubuncinci kubonakala ngathi banike izinto ezininzi kwimenyu "yokuHlola", apho izinto ezininzi bezisoloko zilawulwa njengezimbo zemigca, izicatshulwa, ubukhulu kunye nezinto, kodwa ezo zinto zibonakalayo azikhathalelwa. Basebenzise izinto ezincinci eziluncedo, ezinjengokulula kokudala amakhonkco phakathi kwamaphepha wemephu (ukubekwa) ngokutsala okulula kunye nokwehla, okunokwenziwa kungekuphela ngezinto zangaphakathi zomzobo kodwa ngeefayile zangaphandle ezinje ngemifanekiso okanye amaxwebhu eofisi (igama, ukugqwesa kunye namandla).
Kuyathakazelisa ukuba xa ukuphatha amakhishiti baye bongeza ukhetho lokuvelisa itafile enamandla kuzo zonke izicwangciso ezibandakanyiweyo kwiprojekthi, ukuba zikwazi ukufakwa njenge-index index kunye namaxhumela kuyo yonke le mibono, i-index index okanye i-index index . Ngokufanayo, faka amathebula kwi-dgn, i-excel okanye i-csv edibene nezinto zomdwebo, kubandakanywa ubude okanye iindawo ekufuneka zidibaniswe kwi-quantification yemisebenzi kunye nebhajethi. Ndisoloko ndifumanisa ukuba le nto ingabonakali, kodwa ndiyakushintsha ingqondo yam, ngoku ukuba kunokwenzeka ukuxhuma kwiiprojekthi nge-Bentley Cloud Services.
Kubasebenzisi bezakhono zihlala zikhethwa kukho ukuphakamisa imenyu ejikelezayo kwimikhawulo yemenyu ibhloko; Ukongezelela kukho iinkcazo zokuhamba kweefowuni kunye nokwenza ngokwezifiso imisebenzi.
Yongezwe kwisikhangeli, ukusebenza ngokubaluleka kwiimpawu ezibizwa ngokuba "zizinto", ezinokufakwa iileyibhile ezifana "nekholamu", "umqadi" "1 / 4 rod", njl njl, evumela ukukhangela yazo zonke izinto zohlobo oluthile okanye iipropathi zazo zejometri.
Kwaye njengakwiOfisi, kukhetho "lwefayile", unokubona imisebenzi yesiqhelo yokuvula, ukugcina, ukuthumela, njl. Kodwa nokufikelela kwiiprophathi zendawo yokusebenzela abaziingcali kuphela ababesazi ukuba bazifumana njani; Ngoku zinokhetho oluninzi ngakumbi lolawulo njengokunikezelwa komzimba kunye nokuhluka.
Xa iprogram ivula, umbane kunye nemizekelo, iikholeji zevidiyo kunye nezixhumanisi ezivela kwiindaba. Unako ukuvula iifayile zemizekelo apha, okanye uvule ifayile ethile; Nokuba xa ifayile yomsebenzi ivaliwe, inokuphinda iphindwe kwakhona. ... kodwa ndaye ndazibonela phi ngombala omnyama? XD.
Leli phepha elimkelekileyo lixhunywe kwi-Bentley Funda iseva yokuqeqesha ebonisa izinga lamava, ithuba elihle lokufunda; Ukongeza, ukuxhumeka kwe-RSS kuvumela iBentley ukuba igcine abasebenzisi ngokusesikweni ekunxibelelweni olusemthethweni, kwaye ngezantsi, ukufikelela kuma-intanethi ye-intanethi kunye ne-Bentley Comunities.
Abo bazi i-Benchmarking kunye nezinye izixhobo kwimarike baya kubona ukuba ezi tshintsho aziyiyo yonke into entsha. Nangona kunjalo ndimele ndivume ukuba into eyenziwa yiBentley ukuqinisekisa ukuba iqonga livakalelwa ngokukhawuleza, lisebenzisa imemori encinane kwaye ... nangona ndigxeka bobabini I-Ribbon ye-AutoCAD 2009, Ndimele ndivume ukuba ngoku i-Microstation ibonakala ilula.
Post edlulileyo«Edlulileyo Xa ukusebenzisa iziphakamiso LADM
Post Next Yaphula password VBA Microstation MacroOkulandelayo "